Global Voices teny Malagasy » Kebab, Eny; Revolisiona, Tsia: Mpifindra-monina Sy Ny Tolona Ho An’i Katalaonina · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 30 Oktobra 2017 5:14 GMT 1	 · Mpanoratra Afroféminas Nandika (en) i Marianna Breytman, Liva Andriamanantena
Sokajy: Eoropa Andrefana, Espaina, Fanoherana, Fifindràmonina, Mediam-bahoaka, Politika, Ny Tetezana - The Bridge
“Sainam-pirenena Catalan tao Figueres”. Sary avy amin'i Kippelboy tao amin'ny Wikipedia. CC BY 3.0
Ity manaraka ity dia nosoratan'i Irina Illa Pueyo  ho an'i Afroféminas mikasika ny adihevitra momba ny fahaleovantenan'i Katalaonina  ka nahitsy hifanaraka amin'ny eto.
Iray amin'ireo teny filamatra nohirahiraina tao amin'ny fihetsiketsehana tamin'ny 3 Oktobra tao Barcelone ny hoe “Raha tsy misy ny mpifindra monina, dia tsy misy ny revolisiona”. Olona marobe isika no nitsara izany tamin'ny alàlan'ny hira izay nivoaka avy amin'ny fanamafisam-peo samihafa.
Ny teny toy ny “vehivavy”, “renibe”, “vahoaka”, “mpiasa”, “mpitrongy vao homana “, “anti-kapitalisma”, “anti-fasisma”, “fahaleovantena” no tena notohanana, saingy rehefa tonga ny fotoana ho an'ny “Mpifindra monina”, dia nanirery isika. Fanamafisam-peo teny an-tànana, nanangona ny fofonaina rehetra isika mba hanandram-peo, kanefa ny sofina sy ny masobe vitsivitsy izay talanjona ihany tamin'ireo fitaovam-pandrenesana dimy izay ananan'ny olombelona no hany namaly ity teny ity tamin'io fotoana io. Toa tahaka ny tsy fantatra io teny io, na ihany koa hoe, tsy vonona ny handray izany ireo nanatrika, na dia hoe mba ho fanamarihana fotsiny aza, ao anatin'ity vondrona ity.
Tena gaga aho fa ny tanora manao ‘volo rasta’, ‘misaron-doha (turbans), mirandrana, sy ny akanjo hafa miendrika Afrikana dia toa tsy mankatoa ny teny hoe “mpifindra monina” tao amin'ny hetsika ho fanohanana ireo izay nenjehina tao Katalaonina: ireo mponina ao aminy. Ny tena mahagaga kokoa aza dia ny hoe maro ireo olona no nandeha nihinana kebabs, ilay sakafo malaza indrindra any amin'ny tanàndehibe Eoropeana maro izay avy any Afovoany Atsinanana nandritra ny fiatoana teo anelanelan'ny fihetsiketsehana maraina sy ny tolakandro. Na amin'ny teny hafa ihany koa hoe, raha mety ny mihinana kebab ao amin'ny trano fisakafoanana iray an'ny mpifindra monina, dia tsy misy tombontsoa amin'ny fampandraisana amin'izy ireo na hampidirana azy ireo amin'ny (tolona). Nahagaga ahy ihany koa fa nividy esteladas, sainam-pirenena Katalanina izay hita matetika amin'ny fihetsiketsehana manohana ny fahaleovantena ary asatànan'ireo mpifindra monina andevozina any Shina ireo vahoaka ireo izay miaraka amin'ny volo rasta, randrana sy saron-doha.
Tao amin'ny sekoly izay niasako, nilaza tamiko ny tovovavy iray fa nodarohana raha nandeha niasa ny reniny, Boliviana. Nodarohana ny vehivavy mpifindra monina iray rehefa nandeha niasa sy noho ny tsy fanohanana ilay fitokonana manohitra ny herisetran'ny polisy, saingy tsy navela hifidy akory izy. Raha nivoaka hanohitra ny herisetra ataon'ny polisy izy dia tena vitsy ny vondrom-piarahamonina fotsy.
Raha heverina ho dingana iray ao ambadiky ny ahiahin'ireo vondrom-piarahamonina fotsy matetika ny olana fifindra-monina, any amin'ny maizina tahaka ny fitaovana tsotra fotsiny ihany ary manatanteraka ny asa-kerintsandry hanamora ny asan'ny fotsy hoditra, sy ahafahan'izy ireo mieritreritra.
Misy ny fisalasalana ankapobeny amin'ny fihainoana ireo mpifindra monina any amin'ny faritra izay tsy tena voaavaka ara-bolonkoditra, satria toa zavatra an'ny fotsy ny teoria, raha zavatry ny mpifindra monina kosa ny fanandramana sy ny fanaovana azy ho lasibatra. Mila manomboka manome lanja ny fisian'ny mpifindra monina isika any amin'ny karazana tontolo rehetra ho zavatra mahazatra, fa tsy ho fandrahonana eo amin'ny fampiraisambolo ny fisaina sy ny kolontsaina.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/10/30/109521/
 fahaleovantenan'i Katalaonina: https://globalvoices.org/2017/10/10/beyond-the-yes-and-no-of-catalonias-independence-referendum/